Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance UMoussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Ukuqala, ubizwa ngokuthi "Hunskelper“. Sikunikeza isembozo esigcwele seNdaba kaMoussa Dembele yobuntwana, i-Biography, amaqiniso omndeni, abazali, impilo yakuqala, impilo yomuntu uqobo, indlela yokuphila kanye neminye imicimbi ephambili kusukela lapho ayeseyingane kuya lapho ethandwa khona.
Ukuphila nokukhuphuka kukaMoussa Dembele waseFrance. Isikweletu Sezithombe- I-SportsMole, Iwolintshi, Instagram futhi Leparisien
Yebo, wonke umuntu uyazi unethalente eliphakeme kakhulu, ungumzingeli onomqondo omuhle ohlaselayo, umuzwa wokuma nokuma iso. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaMoussa Dembele ethakazelisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
UMoussa Dembele wazalwa ngosuku lwe-12th lwangoJulayi 1996 njengengane yesibili kubazali bakhe ePontoise, indawo ebisenyakatho nentshonalanga yedolobha laseParis, eFrance. Abazali bakhe bake bafuduka imvelaphi yabo yalandelwa ezweni laseMali Ntshonalanga Afrika.
UMoussa Dembele ozalwe eFrance, umndeni wakhe udabuka eMali
Bobabili abazali, lapho behlala ezweni lakubo ekuqaleni kwama-1990 bahlangana eFrance futhi bashada edolobhaneni lasePontoise, enyakatho yeParis. IPontoise iyindawo engaphansi kweParis evame ukubonwa njengendawo yokuhlala nendawo yokuhlanganisa umndeni kwabokufika baseMaliya abashiya izwe lakubo beya eFrance. Uthi bewazi?… Ababaleki abadumile baseMaliya kule ndawo bahlanganisa imindeni ye UMoussa Sissoko futhi N'Golo Kanté.
UMoussa Dembele akakhuliswanga emndenini ocebile womndeni. NjengoKante, Ubaba wakhe kanye nomama wakhe babefana nabantu abaningi abasebenza imisebenzi ephansi kodwa abangenayo imfundo enhle kakhulu yezimali, ezikhathini eziningi belwa nemali. UMoussa Dembele wakhulela edolobhaneni elisenyakatho neParis eceleni kukadadewabo onegama le-Instagram elithi Dembiz Balla kanye nomfowethu omkhulu okwaziwa kakhulu ngaye.
UMoussa Dembele wakhula eceleni kukadadewabo uSin. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Njengomfana omncane, uMoussa Dembele wayehlala yedwa, owayevame ukushiywa ngaphandle emphakathini. Akekho emisebenzini eminingi efana nezinye izingane endaweni yakhe yasePontoise. Esikhundleni sokudonsela phansi uzodlala nabangane, uDembele wavele wema emuva wabuka enye ingane kubandakanya udadewabo omkhulu nomfowabo. Ngenxa yalokhu kuziphatha, akamenyelwa emizini yabangane yedwa kaningi.
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Just like N'Golo Kanté, umlingani wakubo waseMaliya owayenobuntu obunamahloni, ukudlala ibhola waba ngumthombo wokuqiniseka nokuzethemba indlela kaDembele yokuphunyuka kude nezinto ezingokoqobo zokuphila kwakhe.
Ngenhlanhla, phambi kwabadlali bebhola asebekhulile nalabo abaneminyaka yakhe, uDembele wafunda indlela yokuphuma, isibindi nokuzethemba njengoba ekhombisa izimfanelo ezinhle ngebhola. Noma esafunda esikoleni, wayeqhubeka nokudlala ibhola ngesikhathi sokuphumula kanye nezikhathi zemidlalo. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi samaholide, uDembele wayeqhubeka nokudlala ibhola cishe wonke amahora ekuseni nasekuseni.
Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuthi uDembele azi ukuthi unethalente lokulenza lifane ne-pro. Ekhuthazeka impumelelo yabafuduki abamnyama endebeni yomhlaba waseFrance 1998, waqala ukuphupha esebenzisa ibhola njengendlela yokulwa nobunzima nokuphakamisa isimo somndeni wakhe. UDembele waxoxa ngezifiso zakhe nothisha bakhe besikole abamkhuthaza ngokuthi: Ukuzinikela kwakhe kwezemidlalo kwakuyimali eyayizoyisebenza ngokuzikhandla nangokuzimisela ukuze ikwazi ukuba ngumdlali webhola lezinyawo.
Ngosuku oluthembekile ngemuva kwamakilasi esikole, uMoussa Dembele waya emasimini asendaweni yasePontoise lapho amenyelwa khona kumqhudelwano womakhelwane. Ngemuva komqhudelwano awenze kahle, izindaba ngaye zafika ekilabhini yakubo. Inenjabulo yakhe wonke umndeni wakhe ibingazi mingcele njengoba ebizelwe ukuzothamela izivivinyo yiklabhu yakhe yendawo, e-US Cergy Clos.
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ukuthola isivivinyo nekilabhu yasendaweni yase-US Clergy Clos - obekungelula njengoba kuzwakala. Kuthathe umzamo kamfowethu kaMousa Dembele ukuthi angenelele ngaphambi kokuba bamvivinye. Ngamazwi akhe, ngokusho I-FourFourTwo;
“Ngenkathi umfowethu ezama ukujoyina, bathi abamfuni. Ukuthi sebevele benabadlali abaningi kakhulu okufanele babanakekele. Kepha umfowethu waphikelela wathi: 'Mane umnike isikhathi esisodwa sokuqeqeshwa futhi kube yilokho'… Ngakho bakwenza futhi abakaze bazisole. ”
UMoussa Dembele waba yingxenye ye-US Cergy Clos football academy eneminyaka engu-6 ngemuva kokuqulwa kwecala nabo ngempumelelo ngonyaka we-2002. Lapho ejoyina ikilabhu, waphakanyiselwa ukudlala phambili futhi ngokushesha, waqala ukucwazimula enkundleni.
Ekupheleni komdlalo ngamunye, uDembele wayewuhlobo lwengane eyayiyoke yehluleke ukubala izinhloso zayo ngesinye isikhathi. Wayengumgoli wamagoli wemvelo owayehlala endaweni efanele ngesikhathi esifanele. Ukuthandwa kwakhe akuqashelwa yiPSG ngemuva kokushaya amagoli amaningi nge-US Cergy Clos. Ngemuva kwesizini yebhola le-2003 / 2004, lowo owayedlalela phambili uthathe izinyathelo ezilandelayo emsebenzini wakhe osemusha eqhubeka nenqubo yakhe yokuvuthwa kwebhola ngebhola lentsha laseParis Saint-Germain FC
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
UMoussa Dembele uqhubeke nokuya esikoleni yize abizwa yiPSG. Waqeda isikole sakhe sokuqala ngaphambi kokubhalisa I-Le Moulin à Vent Collège, etholakala eCergy, indawo yokuhlala engasenyakatho nentshonalanga yedolobha laseParis.
KuPSG, uMousa Dembele uqale ohlangothini lwe-U15 kwisizini ye-2010-2011. Izimfanelo zakhe ezinkulu zokusheshisa nokuqeda ukumbona ambone eshaya amagoli we-40 emidlalweni ye-30, okuyisibalo esiphawuleka eshiye othisha bakhe behlabe umxhwele. Ku-2012, uDembele kanye nabalingani bakhe; Kingsley Coman, U-Presnel Kimpembe futhi Adrien Rabiot (konke okufanekiselwe ngezansi) bakhethelwa ukubamba iqhaza kwi-Al Kass Cup eDoha.
Isithombe esingajwayelekile sabanqobi be-U17 PSG be-Al Kass Cup e2012. UMoussa Dembele wayenoRabiot, Coman, Ongenda, Kimpembe, Maignan noDembele. Isikweletu Sezithombe- Leparisien
Kuwo lo mqhudelwano, umgadli waseFrance wazihlukanisa kaningi ngokushaya amagoli amaningi anqumayo, kufaka phakathi ukushaya amagoli ngokumelene neBarcelona. Amandla kaDembele wokushaya amagoli asize iqembu lakhe ekuzuzeni I-Al Kass Cup eDoha ngemuva kokwehlisa iJuventus kowamanqamu.
Lapho Kuya Kuqina: Cishe ekuqaleni kwe-2012, kwavela amahlebezi okuthatha i-PSG futhi kwahlakazwa ngabanikazi abasha bebhiliyoni (Ukutshala Kwezemidlalo eQatar). Lamahlebezi aguquka ngokoqobo ngoMashi walowo nyaka. Okudabukisayo ukuthi uMoussa Dembele wayephakathi kwalabo abathi yize bekalwe kakhulu, akazange anikezwe indawo yeqembu lokuqala ngemuva kokuphothula izifundo zakhe. I-PSG yayinesifiso sokuthenga izibhamu ezinkulu- ukuthandwa kwe UZlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Kevin Gameiro njll
KAKHULUUDembele, yize esiza iklabhu ukuthi iwine i-Al Kass Cup ehlonishwayo NEVER ikwazile ukwenza kwaba yiqembu lokuqala lePSG. Lo mgadli okhungathekile uthathe isinqumo sokuhlala ikilabhu yakubo ngemuva kokuzwa ukuthi indlela yakhe yomsebenzi isivele ivinjiwe ngaphansi kobunikazi obusha be-Qatar Sports Investment.
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
UMoussa Dembele uthathe umkhondo oyingozi wokuqalisa osemncane kangaka phesheya. Eminyakeni ye-16, wajoyina i-English division 2 side, Fulham lapho athola khona isiko elisha, izindlela zokuqeqesha nemikhuba. Njengokujwayelekile eqenjini leFulham U18, ukusebenza kukaDembele kumbone ewina umklomelo wePremier League League ngesizini yakhe yokuqala nekilabhu.
UMoussa Dembele wenza umaki wakhe noFulham njengoba ethole umklomelo webhola lebhola lezinyawo iYoung Player. Isikweletu Sezithombe- BBC
Ukuphakama kukaDembele kwesibhakabhaka kusuka kuCraven Codge kaFulham kukhombisa ngasohlangothini lukazwelonke lwe-U-21 yaseFrance futhi kwaholela ekutheni anqobe umklomelo weFrance Under-21 Player wemiklomelo yonyaka. Ukudluliselwa okunikezwayo akulandwanga ngemuva kwesikhashana ngemuva kokuthola inhlonipho. Phakathi kokunye okunikezwayo, lokho kweCeltic kunqobile njengoba uDembele eba uBrendan Rodgers okokuqala esayina neqembu.
Ukuhambela esigxotsheni saseNyakatho komunye umkhondo oyingozi we-Dembele uqhubeke nokuhweba kwakhe kwebhola eScotland Premier League, iligi engaziwa ngabalandeli abaningi bebhola. UMoussa Dembele wadlala indima ebalulekile kwiCeltic ngesikhathi seChampions League, okubandakanya ukufaka amagoli lapho bebhekene neManchester City (amaphuzu wokugcina 3-3) esigabeni samaqembu.
UMoussa Dembele wakhuthazelela ukwenyuka okukhulu ngokushaya amagoli kuMan City kuChampions League. Image Isikweletu- Hailhailmedia
Ekuqaleni kokuqala isizini ngemuva komlingani ayekanye naye uLeigh Griffiths, umFulentshi wazimisa njengomgadli wokuqala kaBrendan Rodger, wafaka izinhloso ze-19 - ezinhlanu zazo zaqhamuka neRanger (izimbangi ezinkulu zeCeltic). Izinhloso zikaDembele (Amagoli we-32 emidlalweni ye-49 kufaka phakathi ubuyela emuva kuma-hat-trick) uqondise iqembu ekuzuzeni isizini lwabo lokuwina elidumile le-2018 / 2019 Treble. Lokhu kunqoba kwabona abalandeli bemembiza njengeqhawe.
Ngesizini nje ye-1 neCeltic, Moussa Dembele 3 trophies futhi washaya amagoli we-32. Isikweletu Sezithombe- Twitter
Ewina iTreble wabona uDembele ezazisa ngendlela enkulu emakilabhini aphezulu ase-Europe. Kwi-31st ka-Agasti 2018, umgadli we-6-foot uthathe isinqumo sokubuyela emuva ezweni lakhe, kulokhu esayina iklabhu ye-Ligue 1 iLyon.
UKUVIKELA KWE-SWEET: UMoussa Dembele ulinde ukuziphindisela ku-PSG futhi lowo mzuzu wagcina ungaphansi kwezinyanga ze-6 zokujoyina iLyon. Kwabanye abalandeli be-PSG, ukubukela amaphuzu wezimbangi eziphikisana nabo kuyingxenye yomdlalo. Kepha ukubona uMoussa Dembele (owake wadlala nabo) amagoli IDIDEKILE bobabili abalandeli nabadlali. UMoussa Dembele wagubha ngokumelene neqembu lakhe elidala elake lakhombisa ukungakholelwa kuye.
UMoussa Dembele ube nokukhokha ku-PSG, ebeka unozinti ukuthi alale futhi uthulise zonke izimali ezinkulu zamakilabhu. Isikweletu Sezithombe I-FourFourTwo
Umhlatshelo umkhokhele impela uDembele kusukela ngesikhathi sakhe eLyon. Kusukela ngemuva kokuziphindisela ku-PSG, uqhubeke nokwakhe ukukhuphuka kwezulu, i-feat eyamenza waba ngomunye wabasha abasebasha kakhulu ebholeni laseYurophu. Ukunyuka kukaDembele eLyon kungafaniswa nalokhu kwe I-Karim Benzema futhi I-Alexandre Lacazette obani abadala bakhe baseLyon French.
Moussa Dembele Rise to Fame Story Credits Image: Veza, Ama-360nobs futhi Twitter
Abanye, njengoba sihlala sisho, manje ngumlando.
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngayo yonke impumelelo esiyitholile eminyakeni edlule, kuqinisekile ukuthi abalandeli bebhola kumele ngabe bayazindla ukuthi intombi kaMoussa Dembele kungenzeka ibe ngubani. Akunakuphikwa iqiniso lokuthi ukubukeka kwakhe okuhle / ukubukeka okuhle kuhlangene nesitayela sakhe sokudlala bekungeke kumbeke esicongweni sohlu lwazo zonke izifiso zesoka lentokazi.
Abalandeli babuze ukuthi uMoussa Dembele Girlfriend kungenzeka abe ngubani. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Ngemuva kocwaningo oluningi kwi-intanethi, Kubonakala ngesikhathi sokubhala, uMousa Dembele wenze umzamo oqinile wokungazivezi ukuthi ngubani intombi yakhe noma unkosikazi wakhe (okusho ukuthi uma eseshadile). Noma kungenzeka ukuthi akashadile, okusho ukuthi ukungabikho kwe-WAG akukho.
Siyazi kwesinye isikhathi ibhola lingathethelelwa ikakhulukazi uma kukhulunywa ngalo lokuxubana nezindaba zobudlelwano. Ngalesi sizathu, kungenzeka ukuthi uMoussa Dembele umane nje akhethe ukugxila emsebenzini wakhe kunokufuna intombi ayithandayo noma ongaba umkayo.
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi iMoussa Dembele Imininingwane Yempilo Yakho Kungakusiza uthole isithombe esiphelele sobuntu bakhe.
Njengoba kushiwo phambilini, uMoussa Dembele wazalwa enamahloni futhi ethule kodwa kamuva wazithola izizathu zokushintsha umbono wakhe empilweni njengoba ekhula eba nesibindi futhi enamandla. Indaba yakhe yempumelelo ayizanga ize ngomhlatshelo. Kuyo yonke le minyaka, uDembele uye wafakazela abalandeli bebhola ukuthi angakwazi ukuzivumelanisa kalula namandla azungezile, njengoba kubonwa ohambweni lwakhe olwedlule eNgilandi luya eScotland. UMoussa Dembele uyakwazi ukubona ikusasa futhi wazi kahle ukuthi ufunani, wayezoba kuphi nokuthi wayezokwenzanjani eminyakeni emihlanu noma eyishumi kusukela ngesikhathi sokubhala.
Kwelinye ikhasi lempilo yakhe, uMoussa Dembele uzonda izithembiso ezephuliwe njengoba eke waba yisisulu kuso ngenkathi ese-PSG academy. Ngenxa yalokho, manje usunombhalo wokuqapha ohamba ngokulandelayo;
Umuntu ngaphandle kwezwi lakhe akulutho (akukho muntu).
Ukwazi uMoussa Dembele Ukuphila Komuntu kude nebhola. Ikhredithi yesithombe ku- Twitter
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Ngesikhathi sokubhala, uMoussa uhola u- € 48,000 ngesonto. Le yimali eningi kakhulu, yanele ukuthi aphile impilo exotic. Kodwa-ke, ukwahlulela okuthunyelwe kuma-akhawunti akhe ezinkundla zokuxhumana, uMoussa Dembele uhlakaniphile ekuphatheni imali yakhe kanye dUkuhlala phakathi kokusebenziseka nenjabulo okwamanje akusona isinqumo esinzima kuye. Azikho izimpawu zezimoto ezinamadizili, izindawo zokuhlala, ama-boozes, omama njll.
UMoussa Dembele Indlela Yokuphila- Yena ngesikhathi sokubhala akaphili ngaphandle. Credits: Gym4you
Futhi nasendleleni yakhe yokuphila, uMoussa Dembele ungumuntu ovame ukuzithola esenkampanini yabantu abahluke kakhulu. Umfana owake waba namahloni futhi ethule manje usezibona efuna ukuba ngowokuqala kuyo yonke into - ukusuka emsebenzini ukuya emihlanganweni yokuzijabulisa.
UMoussa Dembele Indlela Yokuphila- Unenhlalo futhi manje usefundile ukuba nabangane. Isikweletu Sezithombe: Instagram
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Impumelelo yomndeni kaMoussa Dembele iboshelwe kuye (umkhondli wezinkwa) ngoba ekwenzile ebholeni. Ngesikhathi sokubhala, amalungu omndeni wakwaDembele asebenzise amasu okubhekana nodumo oluza nelinye lamalungu emindeni yawo aphumelela.
Ngesikhathi sokubhala, konke amalungu omndeni (umama, ubaba, umfowethu, udadewethu, njll.) aphatha impumelelo kaMoussa ngokuphila impilo yangasese futhi engabalulekile eFrance yize i-paparazzi ihlala njalo isendleleni nezindlela eziningi zokuxhumana nabezindaba zenhlalo. Ngenkathi abazali bakaMoussa Dembele nomfowabo benekhasi labo lezokuxhumana lingaziwa, lokho ngudadewabo omdala kuyatholakala kodwa akubeke ngasese (ngesikhathi sokubhala) ukuze abalandeli abagunyaziwe kuphela abakwazi ukubona ukuthi wabelani.
UMoussa Dembele udadewethu une-akhawunti yakhe ye-Instagram eyimfihlo ukuze abalandeli abagunyaziwe kuphela abakwazi ukubona ukuthi wabelani
Moussa Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
I-10 Best DEMBepe (2019): Akusezindaba ukuthi kunedlanzana labathandi bebhola lesibongo 'Dembele'. Igama 'Ukuncipha'ithandwa kakhulu ngabathandi bebhola bezinyawo bomdabu waseNtshonalanga Afrika, iningi livela ezweni laseMali. Kulesi sikhathi, sibeke i-10 i-Dembeles ehamba phambili kulo mdlalo.
I-LifeBogger Ibeka i-10 Best Dembeles Out of the Hundreds World Soccer has to Offer. Amakhredithi: I-Barcablaugranes, I-SportsMole, I-Mercato365, Injongo, I-90Min, I-Grimsby ne-Twitter
Kubandakanya i-1: 1 - Ousmane Dembele, I-2 - eyethu iMoussa Dembele, i-3 - UMousa Dembele, 4 - Karamoko Dembele, 5 - Mana Dembele, 6 - Siriki Dembele, 7 - Malaly Dembele, 8 - Bira Dembele, 9 - Mahamadou Dembele no10 - Aliou Dembele.
Izinkulumo ze-eyeball: KuMoussa Dembele, ukugcina amachaphazelo akhe evamile ngesikhathi esinzima emidlalweni yebhola cishe akunakugwenywa. Lokhu kuhlobene impela UPhil Jones ' isimo sobuso ezikhathini ezifanayo.
Ukuqoqwa kweMoussa Dembele Eye Expressions. Ama-Credits Ama-Image: Sun, I-SportsMole, I-Mercato365, Skysports kanye ne-Twitter
Ukuchazwa Kwebhayoloji Kwamehlo Moussa Dembele: Ukuxhashazwa kwezibuko zakhe zamehlo kungumphumela wesenzo sokuzithandela okubandakanya ukuxhumana kwezinzwa okuningi nokusikwa kwemisipha. Lokhu kwenzeka kuphela ngezikhathi ezishubile emidlalweni yebhola.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Moussa Dembele Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.